Bit By Bit - Mifehy - 6.4 efatra fitsipika
Efatra toro lalana afaka mitarika mpikaroka etika miatrika ny tsy fahazoana antoka dia: Ny fanajana ny olona, ​​Beneficence, Fahamarinana, sy ny fanajana ny lalàna sy ny Public Interest.
Ny fahasamihafan'ny etika izay atrehan'ny mpikaroka amin'ny vanim-potoana nomerika dia mitovy amin'ny an'ny hafa. Na izany aza, ireo mpikaroka dia afaka mamaha ireo olana ireo amin'ny fanorenana ny fisainana etika. Amin'ny ankapobeny, mino aho fa ireo fitsipika voalaza ao anaty tatitra roa-ny Belmont Report (Belmont Report 1979) sy ny Menlo Report (Dittrich, Kenneally, and others 2011) -dia afaka manampy ireo mpikaroka handresy lahatra ireo fanamby etika izay atrehin'izy ireo. Rehefa miresaka amin'ny an-tsipiriany bebe kokoa ao amin'ny appendix ara-tantara amin'ity toko ity aho, dia samy vokatry ny fanadihadiana nandritra ny taona maro ny roa tonta tamin'ireo tatitra ireo noho ny fanatanjahantena manam-pahaizana maro miaraka amin'ny fahafahana maro avy amin'ny mpandray anjara isan-karazany.
Voalohany, tamin'ny 1974, ho valin'ny fandalinana ara-pihetseham-pon'ny mpikaroka - toy ny Fitiavana Tuskegee Syphilis Study izay nahitana lehilahy amerikanina afrikana efa ho 400 mahery no nofitahan'ireo mpikaroka ary nandà ny fahazoana fitsaboana azo antoka sy mahomby nandritra ny 40 taona teo ho eo (jereo ny appendice ara-tantara) - Ny Kongresy Amerikana dia namorona vaomiera nasionaly mba hamolavola torolàlana momba ny fitsipika momba ny fikarohana momba ny olom-belona. Taorian'ny efa-taona nivoriana tao amin'ny Foiben'ny fihaonamben'ny Belmont, dia namokatra ny Belmont Report , vondrona iray matanjaka nefa matanjaka. Ny tatitra Belmont dia fototra ara-tsaina momba ny Common Rule , ny fifehezana ny fitsipika mifehy ny fikarohana ataon'ny olombelona izay napetraky ny IRB ho fampiharana (Porter and Koski 2008) .
Avy eo, tamin'ny taona 2010, ho setrin'ny fihoaram-pahefan'ny mpikaroka momba ny fandriam-pahalemana sy ny fahasarotan'ny fampiharana ireo hevitra ao amin'ny tatitra Belmont ho an'ny fikarohana siantifika, ny governemanta Amerikana - indrindra fa ny Departemantan'ny Homeland Security - dia namorona fananganana loko manga dia mamolavola rafi-pitantanana mitarika amin'ny fikarohana momba ny teknolojian'ny fampahalalam-baovao sy fifandraisana (ICT). Ny vokatr'izany ezaka izany dia ny Menlo Report (Dittrich, Kenneally, and others 2011) .
Ny tatitra Belmont sy ny tatitra momba ny Menlo dia manolotra toro-lalana efatra izay afaka mitarika ny fanadihadiana ara-tsosialy ataon'ny mpikaroka: Hajao ny olona , ny fahamendrehana , ny rariny , ary ny fanajana ny lalàna sy ny tombontsoan'ny besinimaro . Ny fampiharana ireo fitsipika efatra ireo amin'ny fampiharana dia tsy mora foana, ary mety mitaky fifandanjana sarotra izany. Ireo fitsipika ireo anefa dia manampy amin'ny fanatsarana ny fifanakalozana, manolotra fanatsarana ny fikarohana, ary ahafahan'ny mpikaroka manazava ny fiheveran'izy ireo sy ny vahoaka.